China Wershada Qalajiyaha Hawada Aan Heatless-ka Lahayn iyo soo saarayaasha | Sihope
Sida laga soo xigtay maamulaha PSA, qoyaanka hawada ku jira waa la isku dhejin doonaa oo lagu cadaadin doonaa rabitaanka gaarka ah ee sorbent ee uumiga. Mashiinku wuxuu ka kooban yahay qaab dhismeed laba munaaradood ah. Sida ay maamusho PLC, labada munaar ayaa si kale u socon doona. Mid ka mid ah munaarad ayaa soo jiidaya qoyaanka hoostiisa cadaadiska sare iyo mid kale oo dhamaystiraya uumiga uumiga iyada oo hawada qalalan ay iskeed u soo saarto, sidaas darteed waxay u socotaa si wareeg ah. Inkasta oo mishiinku uu isticmaali doono xoogaa hawo ah, isticmaalka tamarta dhamaystiran ayaa si weyn uga hooseeya qalajiyaha kulaylka ka yimid ee ku salaysan heerkulka isbeddelka, sidaas awgeed waa mashiinka hawo-cadaynta iyo qalajinta si ballaaran loo isticmaalo hadda.
Qalajiyaha taxanaha ah ee qalajiyaha waxa uu ku daraa mabaadi'da shaqada ee adsorption lulid cadaadis iyo xayeysinta heerkulbeegga. Qalajiyaha wuxuu nuugaa qoyaanka biyaha ee tiirka qalajinta waxaana lagu soo cusboonaysiiyay hawo nadiifin oo tayo sare leh oo la qalajiyey iyo kulayl leh oo ku jirta tiirka dib u soo kicinta iyadoo la adeegsanayo fidinta kulaylka hawada iyo hababka kala duwanaanshaha cadaadiska sare.
Dib-u-soo-noolaynta aan kulaylka lahayn Qalajiyaha hawo-qaboojiyaha ah wuxuu ku salaysan yahay mabda'a PSA, isticmaal saabuunta daloolka leh si aad ugu dhejiso molecules biyaha hawo cadaadissan. qallajin
Tilmaamaha warshadda weelka lagu shubay
Qaabka NO.: 3.8Nm3/min-160Nm3/daq
Habka hawlgalka: Socda
Habka Kululaynta: Convective
• Astaanta Ganacsiga: Sihope
• Asal ahaan: Hangzhou, Shiinaha
• Qaab dhismeedka: Qalajiyaha socodka hawada
Cadaadiska Hawlgalka: Qalajiyaha jawiga
• Habka Dhaqdhaqaaqa: La isku daray
Gaar ahaan: Heerka Jarmalka
• Koodhka HS: 8419399090
3.8Nm3/daqiiqo-160Nm3/daqiiqo Kuleyl la'aan saafiga Qalajiyaha Hawada
Nadiifinta hawada: ≤ 12 ~ 15%
Cadaadiska shaqada: 0.6 ~ 1.0Mpa
Waxa ku jira saliidda gudaha: ≤ 0.01ppm
Dhibicda cadaadiska hawada ee ka soo baxa: -20 ~ -40C
Qalajiyaha: Aluminium firfircoon ama seere molecular
Wakhtiga shaqada: 4 ~ 20 daqiiqo
Heerkulka galitaanka: 0 ~ 45C
Tags Hot: Qalajiyaha hawada qallajiya kulayl-la'aanta ah, Shiinaha, saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshadda, dhoofiyeyaasha, iibiyaha, iibsada, mashiinka kala-soocida hawada, nitrogen PSA wuxuu abuuraa iibiyaha mashiinka, Iibiyaha shaandhada saliidda, shaandhada shaandhada wanaagsan, xoojiyayaasha nitrogen, Iibiyaha Nitrojiinka Nadiifinta Set
Hore: Delta p oxygen samaynta mashiinka
Xiga: KBA Isku darka Qalajiyaha Hawada Hoose ee Dhibcaha Hoose
Qalabka Hawo qalajiyaha
Shaandhooyinka qalajiyaha hawada
Qalajiyaha hawo la cadaadiyo